မဖွဈမနေ ထှကျမယျဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးမြား ဖတျပေး ကွပါ အရေး ကွုံရငျ အသုံးဝငျ ပါတယျ – Shwe Likes
G Shwe | February 28, 2021 | Knowledge | No Comments
တိုကျခိုကျလာသူတှကေို ပွနျလညျတှနျးလှနျဖို့ Self defense tip နညျးန ညျးပေး ပါ့မယျ။ ဒီနညျးတှေ သုံးဖို့ အားကောငျးဖို့မလိုပါဘူး။
1. လကျသီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လကျသီး မဆုပျတတျရငျ လကျကြိုး တတျပါတယျ။ လကျခြောငျးကွားထဲ သော့ထညျ့ဆုပျတာ မြိုးလညျး မလုပျသငျ့ပါဘူး။
2. လကျထဲက တခုခုကို ကိုငျမယျ ထုမယျဆို လကျသီးဆုပျပွီးကိုငျပါ။ (လှံပဈရငျ လှံကိုကိုငျတဲ့ပုံမြိုး)
3. နောကျတခုက လကျသီး ဆုပျနညျးပါ။ လကျမကို အပွငျထုတျပွီး ဆုပျရပါတယျ။ လကျသီးဆုပျပွီး လကျကောကျဝတျနဲ့ တဈတနျးတညျးထားရပါတယျ။ လကျသီးဆုပျရငျ လကျခြောငျးလေးတှေ ညီနရေပါ့မယျ။ လကျညိုးလကျခလယျက ကွှနရေငျ ကြိုးတတျတာမို့ လကျသူကွှယျနဲ့ လကျသနျးကိုပါ အပျေါနညျးနညျးမွှောကျပွီး ညီနအေောငျထားပါ။
အဲ့လို လကျဆဈညီညီ ထိုးလိုကျတဲ့အခါ လကျဆဈလေးခုလုံးက ပဈမှတျအပျေါကသြှားတာမို့ ထိတဲ့လူပိုနာပါတယျ။
4. နားထငျကို လကျဖနောငျ့နဲ့ရိုကျပါ။ အားပွငျးလေ ကောငျးလပေါပဲ။
5. လညျပငျးကို ထိုးပါ။ မေးစကေို့ လကျဖနောငျ့နဲ့ လှနျတှနျးပါ။ တံတောငျတှတျပါ။
6. လူတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ ခွထေောကျပိုသနျကွပါတယျ။ တဈခုခုဆို ကနျပါ ဒူးကောကျကှေးနောကျကို ကနျပါ။ ဖနောငျ့ရယျ၊ ဒူးရယျ၊ တံတောငျရယျကို ပိုသုံးပါ။
7. လကျသီးထိုးရငျ လကျသီးဆုပျနဲ့ လကျကောကျဝတျကိုတောငျ့ပွီး လကျမောငျးအားနဲ့ လှဲထိုးပါ။
8. တဈခုကနျြခဲ့လို့ …ဘောကိုပါ ကနျပါ .. ပေါငျကွားကနျတာ အလှယျဆုံးနဲ့ အထိဆုံးပါ .. မိမိလကျကို ခြုပျကိုငျထားတာမြိုးဆို ဘာဖွဈဖွဈ အထိနာအောငျ ပေါငျကွားကို ကနျတာအထိနာပွီး ကိုယျ့ကိုခြုပျထားသူ နာစပေါတယျ။
9. မကျြနှာ အကာကှယျမပါသူတယောကျ လာခြုပျပါက လကျသီးသို့ တံတောငျနဲ့ နှာခေါငျး နှာနုကို ထိုးပါ။
10. ကိုယျ့ကိုလာ ထိခိုကျသူက အမြိုးသမီးဆို ပါက ရငျသား လညျပငျး သို့ အရှိုကျနရော မြိုးအား တံတောငျ သို့ လကျသီး နဲ့ ခုခံနိုငျပါသညျ .. မိမိဘာသာ ခုခံဖို့ကို လကျဖဝါးမကာပါနဲ့ လကျ ၂ ဖကျလုံး cross ပုံစံ မြိူးလုပျ၍ မိမိခေါငျးနဲ့ မကျြနာကိူ ကာကှယျပေးပါ။ တခုခုဆို ထိုငျခပြဈပါ လကျနှကျမပါတဲ့ မိနျးကလေးမြားးအတှကျ ရုနျးကနျတုနျး ပွုမူလို့ရတာလေးတှမေို့ ပွနျတငျပေးလိုကျတယျ။ ..
Be safe celeupdatenews
တိုက်ခိုက်လာသူတွေကို ပြန်လည်တွန်းလှန်ဖို့ Self defense tip နည်းန ည်းပေး ပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေ သုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။
1. လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီး မဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုး တတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာ မျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။
2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ် ထုမယ်ဆို လက်သီးဆုပ်ပြီးကိုင်ပါ။ (လှံပစ်ရင် လှံကိုကိုင်တဲ့ပုံမျိုး)
3. နောက်တခုက လက်သီး ဆုပ်နည်းပါ။ လက်မကို အပြင်ထုတ်ပြီး ဆုပ်ရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ပြီး လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ တစ်တန်းတည်းထားရပါတယ်။ လက်သီးဆုပ်ရင် လက်ချောင်းလေးတွေ ညီနေရပါ့မယ်။ လက်ညိုးလက်ခလယ်က ကြွနေရင် ကျိုးတတ်တာမို့ လက်သူကြွယ်နဲ့ လက်သန်းကိုပါ အပေါ်နည်းနည်းမြှောက်ပြီး ညီနေအောင်ထားပါ။
အဲ့လို လက်ဆစ်ညီညီ ထိုးလိုက်တဲ့အခါ လက်ဆစ်လေးခုလုံးက ပစ်မှတ်အပေါ်ကျသွားတာမို့ ထိတဲ့လူပိုနာပါတယ်။
4. နားထင်ကို လက်ဖနောင့်နဲ့ရိုက်ပါ။ အားပြင်းလေ ကောင်းလေပါပဲ။
5. လည်ပင်းကို ထိုးပါ။ မေးစေ့ကို လက်ဖနောင့်နဲ့ လှန်တွန်းပါ။ တံတောင်တွတ်ပါ။
6. လူတွေက များသောအားဖြင့် ခြေထောက်ပိုသန်ကြပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ကန်ပါ ဒူးကောက်ကွေးနောက်ကို ကန်ပါ။ ဖနောင့်ရယ်၊ ဒူးရယ်၊ တံတောင်ရယ်ကို ပိုသုံးပါ။
7. လက်သီးထိုးရင် လက်သီးဆုပ်နဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကိုတောင့်ပြီး လက်မောင်းအားနဲ့ လွှဲထိုးပါ။
8. တစ်ခုကျန်ခဲ့လို့ …ဘောကိုပါ ကန်ပါ .. ပေါင်ကြားကန်တာ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အထိဆုံးပါ .. မိမိလက်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတာမျိုးဆို ဘာဖြစ်ဖြစ် အထိနာအောင် ပေါင်ကြားကို ကန်တာအထိနာပြီး ကိုယ့်ကိုချုပ်ထားသူ နာစေပါတယ်။
9. မျက်နှာ အကာကွယ်မပါသူတယောက် လာချုပ်ပါက လက်သီးသို့ တံတောင်နဲ့ နှာခေါင်း နှာနုကို ထိုးပါ။
10. ကိုယ့်ကိုလာ ထိခိုက်သူက အမျိုးသမီးဆို ပါက ရင်သား လည်ပင်း သို့ အရှိုက်နေရာ မျိုးအား တံတောင် သို့ လက်သီး နဲ့ ခုခံနိုင်ပါသည် .. မိမိဘာသာ ခုခံဖို့ကို လက်ဖဝါးမကာပါနဲ့ လက် ၂ ဖက်လုံး cross ပုံစံ မျိူးလုပ်၍ မိမိခေါင်းနဲ့ မျက်နာကိူ ကာကွယ်ပေးပါ။ တခုခုဆို ထိုင်ချပစ်ပါ လက်နှက်မပါတဲ့ မိန်းကလေးများးအတွက် ရုန်းကန်တုန်း ပြုမူလို့ရတာလေးတွေမို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ..